Yellow Slipper Beach Resort Cabangan Zambales, PH - I-Airbnb
Yellow Slipper Beach Resort Cabangan Zambales, PH
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguJody
IYellow Slipper likhaya loSapho lwakho kude nekhaya. Balekela kwi-rustic bohemian enclave yakho apho ubuGcisa, iMibongo, iGadi kunye nolwandle sangana. Yonwabele yonke indawo, uzenzela wena. Gcothwa kwi-Barefoot Luxury ngaphandle kokukhathazeka malunga nemingcipheko yokosulela kwe-covid. Apho ububodwa bunikiweyo kwaye imfihlo yakho iyonwatyelwa
Kukho izindlu ezi-4 zesitayile se-bohemian tikki/kubos zonke zine-aircondirione, ezine-glamping e-1, zahlukene enye kwenye, izindlu zangasese ezimbini kunye nebhafu kunye neshawari yangaphandle. Ikhitshi eligcweleyo w / isitishi sokutyisa. Indawo yokutyela kunye neendawo zokuhlala. Indawo yokupaka yabucala ekhuselekileyo yobuninzi beemoto ezi-3. Zonke ezi zilungiselelwe usapho olunye kuphela ngokubhukisha.
I-Wifi – i-39 Mbps
Relax kwaye wonwabele ukhuseleko lokubhukisha nathi. Uyakonwabela ububodwa kunye nokuba bucala xa ubhukisha nathi. Indawo yonke kuwe. Ukwenza ukuba kukhuseleke ngokuchasene nokuvezwa kwi-COVID-19.
Ikhaya lethu lingqongwe luLwandle neeNtaba. Indawo yethu igcwele amakhaya abantu abaninzi, ngoko ke ngokomyinge, indawo yethu inoxolo kakhulu. Ngaphandle kokuba indawo yokuchithela iholide ekufutshane inyusa ikaraoke yabo. Uyakonwabela uLwandle njengoko aluhlali lugcwele unyaka wonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Jody
Ukuba ufuna ulwazi oluthile, ndingumyalezo kude. 09773970756. Awuyi kuphendula iminxeba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cabangan